सरकारीमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ | Chitwan Post Daily | चितवन पोष्ट दैनिक
सरकारीमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइ
२०७१ पुष २९, मंगलवार ०२:३० गते
दिव्यनगर । एकपछि अर्को गर्दै विद्यार्थी कम हुँदै गएका कारण अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सुरू गरेको सरकारी विद्यालयमा अहिले विद्यार्थीको चाप बढ्न थालेको छ । बोर्डिङ स्कुलमा पढ्नेहरुसमेत अचेल सरकारीमा भर्ना हुन थालेका छन् ।
पश्चिम चितवनको दिव्यनगर गाविस वडा नं. ९ रोदीगाउँको श्री रातापुर निम्न माध्यमिक विद्यालय वि.संं. २०१४ सालमा स्थापना भएको हो । सो विद्यालयमा कुनै बेला कक्षा १ मा मात्रै ११० जना विद्यार्थी थिए । तर दुई वर्षअघि जम्मा एकजना विद्यार्थीमात्रै भर्ना हुन आएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मीकान्त दवाडीले बताए ।
‘त्यति पुरानो स्कुलमा कक्षा १ मा जम्मा एकजना, दुई र तीनमा तीन÷तीनजना, चारमा छजना र कक्षा ५ मा पाँचजना विद्यार्थीमात्रै भर्ना हुन आएपछि हाम्रो होसहवासै उड्यो’ अध्यक्ष दवाडीले भने । त्यसपछि व्यवस्थापन समिति, पूर्व अध्यक्ष र संस्थापकहरु बसेर छलफल गरेपछि विद्यालयमा विद्यार्थी ल्याउन अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने निर्णय गरेको उनले बताए ।
यो निर्णयले मात्रै अभिभावकको मन जित्न सक्दैन थियो । ‘यसका साथै विद्यालयका शिक्षक र व्यवस्थापन समितिका सबैले आ–आफ्ना बालबच्चा पनि यहीँ नै पढाउने भन्ने निधो गरेपछि हाम्रोमा विद्यार्थी आए’ अध्यक्ष दवाडीले भने । दुई वर्षअघि नर्सरीदेखि कक्षा तीनसम्म र गएको शैक्षिकसत्रबाट कक्षा पाँचसम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेको अध्यक्ष दवाडीले जानकारी दिए ।
‘नजिकैको बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दै गरेकी नातिनी स्वतस्वना बखरेललाई मैले पनि यसै विद्यालयमा ल्याएर भर्ना गराएको छु’ स्थानीय अभिभावक जनकलाल निर्मलले भने । त्यस्तै दयाराम पौडेलले पनि बोर्डिङ स्कुलमा पढ्दै गरेकी आफ्नी नातिनी दीपिकालाई पनि यो वर्षदेखि रातापुर निमाविमै भर्ना गरे । एकपछि अर्को गर्दै सो विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थी बढ्न थालेको छ ।
‘नर्सरीदेखि कक्षा आठसम्म गरेर अहिले २०० विद्यार्थी छन् । दुई वर्षअघि जम्मा ७० थिए’ विद्यालयका प्रधानाध्यापक लोकप्रसाद चापागाईंले भने । नयाँ भर्ना हुनेमा ६० प्रतिशत विद्यार्थी बोर्डिङ स्कुल छाडेर आएको उनले बताए । वडा नं. ९ मा एक्लो सरकारी विद्यालय भए पनि वरपर पाँचवटा बोर्डिङ स्कुल भएको हुँदा धेरै विद्यार्थी बोर्डिङ स्कुलमै जाने गरेको उनले बताए ।
‘तोकिएको बिदाबाहेक बन्द हड्तालमा पनि हाम्रो स्कुलमा पढाइ हुन्छ’ अध्यक्ष दवाडीले भने । आउँदो शैक्षिकसत्रबाट कक्षा ६ र सातमा पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने तयारी गरेको उनले बताए । ‘एकै पटक सबै कक्षामा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन सम्भव देखिएन । तल्लो तहबाट बिस्तारै पढाउँदै कक्षा आठसम्म नै अङ्ग्रेजी माध्यममा मात्रै पढाइ हुने स्कुल बनाउने छौँ’ अध्यक्ष दवाडीले भने ।
विद्यालयमा राहत कोटाका चार, स्थायी दरबन्दीका चार र अस्थायी दुईजना शिक्षक छन् । त्यस्तै अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउन थालेपछि नपुग भएका तीनजना शिक्षकलाई निजी स्रोतमा रहेको प्रधानाध्यापक चापागाईंले बताए । निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब दिन विद्यालयको थप आयस्रोत नभएकाले केही शुल्क भने उठाउने गरेको उनले जानकारी दिए ।
‘शुल्क तिर्न नसक्नेलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था पनि छ । जे गछौँ सबै अभिभावकको सल्लाहमा गर्छौ’ प्रधानाध्यापक चापागाईंले भने । वैशाख, भदौ र पुसमा सबै अभिभावकहरुको भेला राखेर आवश्यक निर्णय लिने गरेको उनले बताए ।